नेपालकै शक्तिसाली देवीको मन्दिर जबसम्म मेरो नाममा मन्दिर बन्दैन तबसम्म म धेरै मान्छेहरुको भोग खा’न्छु भनिन् - Kohalpur Trends
नेपालकै शक्तिसाली देवीको मन्दिर जबसम्म मेरो नाममा मन्दिर बन्दैन तबसम्म म धेरै मान्छेहरुको भोग खा’न्छु भनिन्
पूर्वी पहाड र मध्य तराईबाट राजधानी भित्रिने सबैभन्दा छोटो दूरी हो बिपी राजमार्ग। जहाँ दैनिक हजारौँ सवारी साधन चल्ने गदर्छ जुन मार्गलाई जापान सरकारले २५ अर्बको लगानीमा निर्माण गरेको हो।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका ५ मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरको तल अक्कर भीर र सुनकोशी नदी रहेको छ।काठमाडौंबाट बनेपा धुलिखेल भकुण्डेबेसी नेपालथोक हुँदै खुर्कोट नजिकै रहेको ठाउँ हो रिट्ठे भीर। जुन ठाउँको सडकमा हजारभन्दा बदी ऐनाहरु टाँसेको देख्न सकिन्छ। यो दृश्य देख्ना साथ सबैको मनमा एक किसिमको कौतुहलता पैदा हुनु स्वभाविकै हो।
सडकको भित्ताभरी ऐना टास्नुको पछाडि धेरै कुराहरु लुकेको छ। जब कोही यात्रु होस् अथवा सवारी चालक त्यहाँ पुग्नु अगाडि नै सबैको मनमा एक किसिमको डर पैदा हुन्छ। जुन ठाउँ धेरै दु्घर्घटना हुने गर्दछ। केही तथ्यलाई हेर्दा विसं २०५८ वैशाख २० गते सिन्धुलीबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरमा बस खस्दा १४ जनाको निधन भएको थियो। २०६८ असोज २६ गते त्यसै ठाउँमा बस खस्दा बसका सबै यात्रु ४२ जनाको निधन भएको थियो। त्यसको ठिक छ वर्षपछि २०७६ असोज २६ गते ६ जनाको निधन भएको थियो जुन ठाउँमा धेरै यात्रुहरुले ज्यान गुमाएका छन्।
ऐनाहरु भित्र लुकेका अनेकै रहस्यहरु आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त्यस ठाउँमा गोरेटो बाटो थियो। बाटो नजिकै एउटा ठुलो सालको रुख थियो। रुखमुनि सानो पोखरी थियो। जुन पोखरीबाट पानी आउथ्यो। मानिसलाई पानी लैजान सजिलो हुन्थ्याे। तर जापान सरकारले सडक बनाउने क्रममा पानी र पोखरी दुवै मासिय। पोखरीमा देवी छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भएन जहाँ पूजा आरधना गरिन्थ्यो। त्यसको केही समयपछि एउटा आठ वर्षीया बालिकामा देवी उत्पन्न भइन् र उनले म देवी माता हुँ मलाई तिमीहरुले बस्न दिएनौ मेरो बस्ने ठाउँ नै भत्कायौ मेरो टाउको माथि गाडीहरु गुडिरहेको छ। मेरो लागि कसैले पनि मन्दिर बनाइदिएन्। जबसम्म मेरो नाममा मन्दिर बन्दैन तबसम्म म धेरै मान्छेहरुको भोग खान्छु भनिन्।
The put up नेपालकै शक्तिसाली देवीको मन्दिर जबसम्म मेरो नाममा मन्दिर बन्दैन तबसम्म म धेरै मान्छेहरुको भोग खा’न्छु भनिन् appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: चोखो मनले लाख बती बालेको फोटोलाई छोएर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस सारा दुख पाप काटिनेछ ॐ ॐ ॐ !!!
Next Next post: सामा चकेवा पर्वका लागि आकृति बनाउने काम शुरू